Thit Htoo Lwin: 4/24/11 - 5/1/11
ဒီနေ့ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာသတင်းများ (၀၃-မေ-၂၀၁၁)
မင်းအောင်လှိုင် (ဓာတ်ပုံ - Getty Images)
စာနယ်ဇင်းများကို ရောင်းချရန် ပြင်ဆင်
ဗိုလ်ကြီးဟောင်း နေမျိုးဇင်ကို တရားစွဲပြီ (နှိပ်ရန်)
တောင်ငူတွင် NLD အခမဲ့ကျောင်း ဖွင့် (နှိပ်ရန်)
အကြံပေးအဖွဲ့ ဖွဲ့ခြင်းအပေါ် ဦးမြင့် အမြင် (အင်တာဗျူး)(နှိပ်ရန်)
ပြည်သူ့ဂုဏ်ရည်ဆု ဆန်ခါတင်စာရင်း ထုတ်ပြန်(နှိပ်ရန်)
သတင်းလွတ်လပ်ခွင့်နဲ့ ဝေးသေးတဲ့ မြန်မာ(နှိပ်ရန်)
အစောဆုံး ဇွန်လ မှာ အလုပ်လုပ်ခွင့်လက်မှတ်ပေးဖို့ ထိုင်း ပြင်ဆင်(နှိပ်ရန်)
သတင်းအပိတ်ပင်ဆုံး နိုင်ငံစာရင်းကနေ မြန်မာ မထွက်နိုင်သေး(နှိပ်ရန်)
အလုပ်သမားအဖွဲ့ချုပ် ဦးဆောင်ဖွဲ့ စည်းရေး NLD က ပြန်လည် ရှင်းလင်း(နှိပ်ရန်)
NLD ရင်ထိုး၊ တံဆိပ်နှင့် ဆင်တူယိုးမှားလုပ်ပြီး ဂျာနယ်များ ရောင်းချ(နှိပ်ရန်)
မြန်မာနိုင်ငံဟာ စာနယ်ဇင်းလွတ်လပ်ခွင့် ဒုတိယ အဆိုးဆုံး (နှိပ်ရန်)
အာဆီယံ လူထုအခြေပြုအဖွဲ့များ မြန်မာ့နိုင်ငံရေး အခြေအနေ ဆွေးနွေး (နှိပ်ရန်)
အာဆီယံ မြန်မာ အပြန်အလှန် အရေးပါမှု ဒေါ်စုထောက်ပြ(နှိပ်ရန်)
ရုံးလုပ်ငန်းထက် မူစယ် နမ့်ခမ်း လဝကများ ကူးတို့ဆိပ် မီးသွေးခွန်စောင့်ကောက် (နှိပ်ရန်)
မြန်မာစစ်တပ်မှ တပ်ရုပ်ရန် ရာဇသံပေးပြီးနောက် ဝ တပ်ဖွဲ့အချို့ရုပ်သိမ်း (နှိပ်ရန်)
မြန်မာအစိုးရအတိုက်အခံ နိုင်ငံရေး/ စစ်ရေးအဖွဲ့များအပေါ် ထိုင်းအာဏာပိုင်တို့ တင်းကြပ်လာ(နှိပ်ရန်)
ပျောက်ဆုံးရေလုပ်သားများအရေး အလုပ်ရှင်များတာဝန်မဲ့ဆက်ဆံ (နှိပ်ရန်)
ဗိုလ်ကြီးဟောင်းနေမျိုးဇင် ကို တရားစွဲဆို(နှိပ်ရန်)
မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီအရေး ကူညီရန် အာဆီယံကို ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ပြော (နှိပ်ရန်)
ဘင်လာဒင်သတင်း အစိုးရသတင်းစာများ မထင်မရှား ဖော်ပြ (နှိပ်ရန်)
ဒုက္ခသည် ၅၀၀ ကျော် ထိုင်းဘက်ထပ်မံ ထွက်ပြေး (နှိပ်ရန်)
လက်မှတ်သစ် ထုတ်ပေးမည့် သတင်းကြောင့် မြန်မာအလုပ်သမားများ ထိုင်းသို့ ပိုဝင်လာ (နှိပ်ရန်)
နေပြည်တော် ရပ်/ကျေး အုပ်ချုပ်ရေးမှူးနေရာ ကြံ့ဖွံ့အများစုရ (နှိပ်ရန်)
အစိုးရသစ် အကျဉ်းသား လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့် ပေးဖွယ်ရှိ (နှိပ်ရန်)
NIB အကြီးအကဲအဖြစ် ဗိုလ်ချုပ်ကြီး မင်းအောင်လှိုင် စတင် တာဝန်ယူ (နှိပ်ရန်)
ဒုတိယအကြိမ် ပြည်သူ့ဂုဏ်ရည်ဆု ပေးမည်(နှိပ်ရန်)
5/03/2011 01:06:00 PM
ဒီနေ့ နိုင်ငံတကာသတင်းများ (03 မေ 2011)
ဘင်လာဒင် နေရာမသိခဲ့တာ ပါကစ္စတန်အရှက်ရ(နှိပ်ရန်)
ဘင်လာဒင် စစ်ဆင်ရေး အမေရိကန် ထုတ်ပြန်(နှိပ်ရန်)
ဘင်လာဒင် ဖမ်းနိုင်ဖို့ ပါကစ္စတန် ကူညီ(နှိပ်ရန်)
ပါကစ္စတန်နဲ့ ဘင်လာဒင် ဆက်နွယ်မှု မေးခွန်းထုတ်ခံရ(နှိပ်ရန်)
ဘင်လာဒင်ကို ဝင်တိုက်တာ ပါကစ္စတန်ကို အသိမပေးခဲ့(နှိပ်ရန်)
5/03/2011 09:38:00 AM
Myanmar News Now:3May 2011
Burma as Asean Chair in 2014? Think Again. (Editorial)(Click)
Free Burma VJ campaign launch(Click)
Suu Kyi calls for ASEAN countries to push Burma's democracy(Click) Man in the mirror in Myanmar(Click)
MYANMAR: Three years later, still no shelter (Click)
Myanmar forms advisory board to president (Click)
New Myanmar govt must move toward democracy(Click)
5/03/2011 06:55:00 AM
ဒီနေ့ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာသတင်းများ (၀၂-မေ-၂၀၁၁)
၃နှစ်ကြာခဲ့ပေမဲ့ နာဂစ်ဒဏ်ခံပြည်သူတွေ ရုန်းကန်နေရဆဲ
၃ နှစ်ကြာခဲ့ပေမဲ့ နာဂစ်ဒဏ်ခံလူထု ပြန်မထူထောင်နိုင်သေး(နှိပ်ရန်)
နာဂစ် မုန်တိုင်း ပျက်စီးမှုများ ၃ နှစ်ကြာ နာလန်မထူနိုင်သေး(နှိပ်ရန်)
ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးဖို့ ဝ အဖွဲ့ တောင်းဆိုမည်(နှိပ်ရန်)
ထိန်းသိမ်းခံ ဗိုလ်ကြီးဟောင်း ဦးနေမျိုးဇင်ကို အင်းစိန်ထောင် ပို့ပြီ(နှိပ်ရန်)
လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့် မကြာခင် ပေးဖွယ်ရှိ(နှိပ်ရန်)
နာဂစ်ဘေးကို သင်ခန်းစာ ယူကြဖို့ မိုးလေဝသပညာရှင် တိုက်တွန်း(နှိပ်ရန်)
၀တပ်ဖွဲ့တွေနဲ့ မြန်မာစစ်တပ် ဆက်လက်တင်းမာ(နှိပ်ရန်)
နာဂစ်ဆိုင်ကလုန်း ၃ နှစ်ပြည့်ပေမဲ့ ဒေသခံတွေ အခက်ကြုံနေရဆဲ(နှိပ်ရန်)
မြန်မာနိုင်ငံတွင်း နိုင်ငံခြား ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု တိုးများလာ(နှိပ်ရန်)
အယ်ကေဒါခေါင်းဆောင် အိုစမာဘင်လာဒင် ကို အသေဖမ်းမိ(နှိပ်ရန်)
အစိုးရသစ်နှင့်စကားပြောရန် UWSA ကမ်းလှမ်း(နှိပ်ရန်)
NDF ပါတီတွင်း အပြန်အလှန်တိုင်ကြားမှုများကို ကော်မရှင်စစ်ဆေး(နှိပ်ရန်)
ဆင်ကြံ ကြံသူတွေရဲ့ အကြံပေးအဖွဲ့ (နှိပ်ရန်)
နာမည်ကြီး စာရေးဆရာများ သုတစွယ်စုံစာပေဆု ရရှိ (နှိပ်ရန်)
ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း နိုင်ငံရေး အထူးဆောင်းပါး ပေါင်းချုပ် ရောင်းကောင်းနေဆဲ (နှိပ်ရန်)
ဖျာပုံ ရေလုပ်သားများ အဓမ္မ ခိုင်းစေခံရမှုရှိနေ (နှိပ်ရန်)
ဖြူးတိုးဂိတ် ယာဉ်ဖြတ်သန်းခ သတ်မှတ်နှုန်းထက် ပိုကောက်နေ (နှိပ်ရန်)
သျှမ်းပြည်တပ်မတော် တပ်စခန်းအား မြန်မာစစ်တပ်ဆက်လက်တိုက်ခိုက် (နှိပ်ရန်)
သျှမ်းသူပုန်အမာခံ သံသယဖြင့် မိုင်းရှူးဒေသခံ ဖမ်းဆီးချုပ်နှောင်ခံရ(နှိပ်ရန်)
ဂီရိဒဏ် ဆိုးရွားစွာခံခဲ့ရသော ဒေသများတွင် ဆန်းဈေး မြင့်တက် (နှိပ်ရန်)
5/03/2011 12:04:00 AM
၂၀၁၁ ခုနှစ် ပြည်သူ့ဂုဏ်ရည် ဆန်ကာတင် (၅) ဦး ရွေးချယ်
ဒီနှစ်ပြည်သူ့ဂုဏ်ရည်ဆု အတွက် အဆိုပြုခံထားရသူ လူပုဂ္ဂိုလ် အဖွဲ့အစည်းအသီးသီးကနေ ဆန်ကာတင်(၅)ဦးရွေးချယ်လိုက်ကြောင်း သတင်းရရှိပါတယ်။ ရွေးချယ်ခံရသူတွေကတော့ မဖြူဖြူသင်း တောင်ဒဂုံ အိတ်ခ်ျအိုင်ဗွီစင်တာ တာဝန်ခံ ဦးဇာဂနာ လူရွှင်တော်၊ ဒါရိုက်တာ၊ စေတနာ့ဝန်ထမ်း လူမှု့အထောက်ကူပြုအဖွဲ့(အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်) ဒေါ်ရှု သံဃာတော်များနဲ့သီလရှင်များအား ထောင်ဝင်စာပေးပို့သူ ဦးရန်နိုင်အောင်(ခေါ်)ဦးဖိုးဖြူ နိုင်ငံရေးအမှု့လိုက်ရှေ့နေ
တို့ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီ (၅)ဦး ထဲကနေ တဦး ကို မေလ (၄) ရက်နေ့ကစပြီး မဲစနစ်နဲ့ ထပ်မံရွေးချယ်သွား မှာဖြစ်ကြောင်း ပြည်သူ့ဂုဏ်ရည် အဖွဲ့ဝင် Albany မြို့ မှ ကိုထွန်းထွန်း ကပြောပါတယ်။ ရွေးချယ်ခံ ရသူတဦးကိုတော့ ပြည်သူ့ဂုဏ်ရည်ဆု ပေးအပ်မှာပါ။ ဒီဆုပေးပွဲကို မေလ(၁၅)ရက်နေ့မှာ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု အနောက်ခြမ်း ဆန်ဖရန့်စစ္စကို မြို့မှာ ပြုလုပ်ဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်။ ကျန်(၄)ဦးကို လည်း ငွေသားဒေါ်လာ(၁၀၀၀)နဲ့ ဂုဏ်ပြုလက်မှတ်ပေးအပ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ ပဏာမရွေးချယ်ခံထားရတဲ့ သူ (၅)ဦးရဲ့ကိုယ်ရေးရာဇာဝင် တွေကိုတော့ ပြည်သူ့ဂုဏ်ရည် ၀က်ဆိုဒ်ကနေ တဆင့်အောက်မှာပြန်လည်ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်
ဒီနေ့ နိုင်ငံတကာသတင်းများ (02 မေ 2011)
အိုစမာ ဘင်လာဒင် ဖမ်းမိခဲ့ရာအိမ်
ထရစ်ပိုလီ မြို့တော်မှာ သံရုံးတွေ တိုက်ခိုက်ခံရ
ငလျင်ဘေးသင့်ဒေသတွင် အကြီးမားဆုံး ပျက်စီးဆုံးရှုံးခဲ့သော မီယာဂိ ခရိုင်သို့ သွားရောက် လုပ်အားပေးခဲ့သည့် သတင်းမှတ်တမ်း ဓါတ်ပုံများ(နှိပ်ရန်)
အပစ်ရပ်ဖို့ သဘောတူညီချက် ရပြီ(နှိပ်ရန်)
ပုပ်ရဟန်းမင်းကြီး ဂျွန်ပေါလ်(၂) ကို ‘စိန့်’ အဖြစ် ဂုဏ်ပြုပွဲကျင်းပ (နှိပ်ရန်)
မေဒေးနေ့ နိုင်ငံတကာ အလုပ်သမား ဆန္ဒပြပွဲများ (နှိပ်ရန်)
ပြန်လည်ထူထောင်ရေး ဂျပန်လွှတ်တော် ဒေါ်လာ ၄၉ ဘီလီယံ သုံးမည်(နှိပ်ရန်)
ဘင်လာဒင် သေပြီးနောက် အမေရိကန် လုံခြုံရေး သတိပေး(နှိပ်ရန်)
ဘင်လာဒင် အမေရိကန် အသေဖမ်းဆီးရမိ(နှိပ်ရန်)
အိုစမာ ဘင်လာဒင် သေပြီ(နှိပ်ရန်)
လစ်ဗျားရှိ ဗြိတိန်နဲ့ အီတလီ သံရုံးများ တိုက်ခိုက်ခံရ(နှိပ်ရန်)
ဆီးရီးယား အတိုက်အခံ ရာနဲ့ချီ ဖမ်းဆီးခံရ (နှိပ်ရန်)
လစ်ဗျား သံအမတ် ဗြိတိန်က နှင်ထုတ်(နှိပ်ရန်)
5/02/2011 10:40:00 AM
Myanmar News Now2May 2011
Myanmar's pro-democracy leader Aung San Suu Kyi addresses her supporters from her house compound after her release from house arrest in Yangon, Mayanmar, Saturday, Nov 13, 2010. -- PHOTO : AP
Burma ‘preparing prisoner amnesty’(Click)
Official says Burma to grant amnesty to prisoners(Click)
Myanmar three years on since Cyclone Nargis(Click)
Myanmar to grant amnesty to prisoners: official (Click)
သဘာဝဘေးများ၌ မုန်တိုင်းက ထိပ်ဆုံးတွင်ရှိနေ
Sunday, 01 May 2011 14:50
လွန်ခဲ့သော ၂၀၀၈ ခုနှစ် မေလ ၂ ရက်နေ့ မွန်းတည့်အချိန်ခန့်က ဟိုင်းကြီးကျွန်းမြို့နယ်ခွဲကို စတင် ၀င်ရောက်တိုက်ခတ်ခဲ့ပြီး ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသ ကြီး၊ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး၊ မွန်ပြည်နယ်၊ ကရင်ပြည်နယ်တို့ကို ဖြတ်ကျော်ကာ ထိုင်းနိုင်ငံအတွင်း အား ပျော့ပျက်ပြယ် ၀င်ရောက်သွားခဲ့သော ဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်း နာဂစ်တိုက်ခတ်ခဲ့သည်မှာ ၂၀၁၁ ခုနှစ် မေလ ၂ ရက်နေ့တွင် သုံးနှစ်ပြည့်ခဲ့ပြီ ဖြစ်သည်။
5/01/2011 10:26:00 PM
ဒီနေ့ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာသတင်းများ (၀၁-မေ-၂၀၁၁)
မဲဆောက်မြို့ ကမ္ဘာ့အလုပ်သမားနေ့ အခမ်းအနား(နှိပ်ရန်)
အလုပ်သမားသမဂ္ဂNLD ဦးစီး ဖွဲ့မည်(နှိပ်ရန်)
ကရင်နီပြည် ငြိမ်းချမ်းရေးကိစ္စ ကြံခိုင်ရေးပါတီသို့ တင်ပြရန် အစီအစဉ်ရှိ (နှိပ်ရန်)
မြန်မာတွေနဲ့သင်္ဘော ပင်လယ်ဓားပြ ပြန်ပေးဆွဲခံရ(နှိပ်ရန်)
ဂြိုဟ်တုဆက်သွယ်ရေး အရှိန်မြှင့်ဖို့ မြန်မာအစိုးရ ပြင်ဆင်(နှိပ်ရန်)
အလုပ်သမားရေး လှုပ်ရှားမှုအဖွဲ့ NLD ဖွဲ့စည်းမည်(နှိပ်ရန်)
နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား လွတ်မြောက်ရေး လှုပ်ရှားမှု အရှိန်ရ(နှိပ်ရန်)
ပိတ်ပင်ထားသည့်ကြားမှ သတ္တုရိုင်းများ တရုတ်နိုင်ငံဘက်ပို့(နှိပ်ရန်)
ဒီမိုကရေစီနည်းကျ အလုပ်သမားသမဂ္ဂ NLD ဖွဲ့မည်(နှိပ်ရန်)
DV Visa ကံစမ်းမဲ အတုတွေသတိထား(နှိပ်ရန်)
အလုပ်သမားသမဂ္ဂများ ဖွဲ့စည်းခွင့်ရရေး တောင်းဆို(နှိပ်ရန်)
ဂျာမဏီမှာ လုပ်မယ့် မြန်မာနိုင်ငံ အပြောင်းအလဲဆိုင်ရာ နိုင်ငံတကာဆွေးနွေးပွဲ(နှိပ်ရန်)
(၁၈) ကြိမ်မြောက် အာဆီယံထိပ်သီး ဆွေးနွေးပွဲသို့ နိုင်ငံတော်သမ္မတ ဦးသိန်းစိန် ခေါင်းဆောင်သော မြန်မာကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ တက်ရောက်မည်(နှိပ်ရန်)
နိုင်ငံတော်သမ္မတ အကြံပေးအဖြစ် ခန့်အပ်ခံရသူအချို့ ဧပြီလမှစ၍ နေပြည်တော်တွင် တာဝန်ထမ်းဆောင် လျက်ရှိကြောင်း သိရ(နှိပ်ရန်)
နယ်ခြားရှိ ဝ နှင့် မိုင်းလားတပ်အချို့ ယခုလကုန် နောက်ဆုံးထား တပ်ဆုတ်ရန်ရာဇသံပေး(နှိပ်ရန်)
ပြည်တွင်း ငြိမ်းချမ်းရေး အတွက် သမာသမတ်ရှိ ပုဂ္ဂိုလ်များ ကြားဝင် ဆောင်ရွက်သင့်(နှိပ်ရန်)
၁၀ ကြိမ်မြောက် တရုတ် - မြန်မာနယ်စပ် ကုန်စည်ပြပွဲ ကျင်းပ(နှိပ်ရန်)
ကလေးစစ်သားကိုယ်တိုင် အိုင်အယ်လ်အို ရုံးကိုတိုင်ကြား(နှိပ်ရန်)
အလုပ်သမားအစည်းအရုံးဖွဲ့စည်းတည်ထောင်မည်ဟု NLD ကြေညာ(နှိပ်ရန်)
မဲမသမာမှု တိုင်ကြားချက်များ မေလဆန်းတွင် ပြန်လည်စစ်ဆေးမည်(နှိပ်ရန်)
ဝ တပ်ဖွဲ့ ကို မြန်မာအစိုးရ ရာဇသံရက်စေ့(နှိပ်ရန်)
ဒေါက်တာ ဦးမြင့် တုန့်ပြန် ဖြေရှင်း(နှိပ်ရန်)
5/01/2011 06:24:00 PM
ဒီနေ့ နိုင်ငံတကာသတင်းများ (01 မေ 2011)
နေတိုး လေကြောင်း တိုက်ခိုက်မှု အတွင်း တွေ့ရတဲ့ အပျက်အစီးများ
လစ်ဗျားခေါင်းဆောင်ကို ပစ်မှတ်မထားကြောင်း NATO တပ်ဖွဲ့ ငြင်းဆို(နှိပ်ရန်)
လစ်ဗျားက တိုက်ခိုက်မှုတွေ အပေါ် နေတိုးငြင်းဆို(နှိပ်ရန်)
ဆီးရီယား ဒါရအာမြို့မှာ အရပ်သား ၆ ဦး ပစ်သတ်ခံရ(နှိပ်ရန်
ဂျပန် ဖူကူရှီးမားနူကလီယား အကြံပေး နုတ်ထွက်(နှိပ်ရန်)
နေတိုးလေကြောင်းစစ်ကြောင့် ဂဒါဖီ သားတဦး သေဆုံး(နှိပ်ရန်)
ဂဒါဖီသား နေတိုး ဗုံးကြဲမှုမှာ သေဆုံး(နှိပ်ရန်)
5/01/2011 06:05:00 PM
NewsNow:(Myanmar) 1 May 2011
Signs of Change in Burma's Media Landscape?(Click)
First US Ambassador to Asean Expected to Press Burma(Click)
Veteran's Burma trip turns into nightmare(Click)
Civil Strife will prolong under Burma’s new president (Click)
The savage toll from Burma's dirty war(Click)
Some 38 armed group members surrender in Myanmar in three months (Click)
Myanmar president urges workers to work for developing nation (Click)
Myanmar strives for satellite communication development(Click)
5/01/2011 05:52:00 PM
NLD မေဒေး မှာ အလုပ်သမားသမဂ္ဂ ဖွဲ့စည်းဖို့ကြေငြာလိုက်ပြီ
5/01/2011 06:33:00 AM
ကျင်တုတ်ခံဝံ့ မခံဝံ့ (ဆောင်းပါးရှင် ဒေါက်တာလှိုင်မြင့်)
Sunday, May 1, 2011 ကျင်တုတ်ခံဝံ့ မခံဝံ့ အစိုးရသစ်ကနေ နိုင်ငံရေးပါတီတွေ ကို သတိပေးသလိုနဲ့ NLDကို အဟမ်းအဟမ်း လုပ်လာတယ်။ ကျန်ပါတီတွေကို လဲခြိမ်းခြောက်လာပါတယ်။ စစ်သားဆိုပြီး သတ္တိရဲရဲမပြရဲတာကို ထင်ဟပ်ပြလိုက်တာပါဘဲ။ သူတို့လုပ်နည်း လုပ်ဟန်အတိုင်း ကြောက်တတ်သူကို (အဟမ်းအဟမ်း) လုပ်ကြည့်လာတာပါ။ ကြောက်တတ်သူ မဟုတ်ရင် (ဟဲဟဲ) လုပ်ပြန်ရော။ သူတို့ သတ္တိက ရင်ဆိုင်သူရဲ့ သတ္တိအပေါ်မှာ မူတည်ပြိး ပြောင်းလဲနေတာပါ။ ကာလံ ဒေသံ ဆိုတာမျိုးပေါ့။
5/01/2011 06:20:00 AM
ဒီနေ့ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာသတင်းများ (၃၀-ဧပြီ-၂၀၁၁)
(UN Photo/Jean-Marc Ferré)ကုလသမဂ္ဂ လူ့အခွင့်အရေးကောင်စီ ၁၆ ကြိမ်မြောက် အစည်းအဝေးကို ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံ ဂျီနီဗာမြို့တွင် ပြုလုပ်နေစဉ်။ (UN Photo/Jean-Marc Ferré)
ဒေါ်စုမိတ်ဆွေ စီးပွားရေး ပညာရှင် ဦးမြင့်၏ ပေးစာ(နှိပ်ရန်)
နိုင်ငံရေးအရ ပူးပေါင်းမှုမရှိဟု ရွေးကောက်ပွဲဝင် ပါတီများကို ဝေဖန် (နှိပ်ရန်)
စီမံချက်ဖြင့် ဖမ်းဆီးမှုများကြောင့် မီဇိုရမ်နေ မြန်မာများပုန်းရှောင် (နှိပ်ရန်)
ချောင်းသာတွင် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ဟောပြောပွဲ ကျင်းပမည် (နှိပ်ရန်)
ဗြိတိသျှ တော်ဝင်မင်္ဂလာပွဲ မြန်မာများလည်း စိတ်ဝင်စား (နှိပ်ရန်)
အစိုးရသစ်လက်ထက် သတင်းလွတ်လပ်ခွင့် မျှော်လင့်ချက်မရှိ (နှိပ်ရန်)
ကျောက်ဖြူ ပြည့်တန်ဆာခန်းများ အာဏာပိုင်များ ကာကွယ်ပေးနေ (နှိပ်ရန်)
ငလျင်ဒဏ်သင့် ဒုက္ခသည် ကူညီရေး ရှမ်းစာပေနဲ့ ယဉ်ကျေးမှုအဖွဲ့ ရန်ပုံငွေရှာဖွေ(နှိပ်ရန်)
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ကမ္ဘာ့ကလေးများအဖွဲ့ နာယက ခန့်အပ်(နှိပ်ရန်
စုံစမ်းရေးကော်မရှင်ဖွဲ့ဖို့ ဥပဒေမူကြမ်းတင်ရန် အမေရိကန်ကို တိုက်တွန်း(နှိပ်ရန်)
ဝနဲ့ မိုင်းလား တပ်ရုပ်ဖို့ အစိုးရဖိအားပေး(နှိပ်ရန်)
မီဇိုးရမ်းမှာ မြန်မာတွေ ဆက်ဖမ်း(နှိပ်ရန်)
4/30/2011 10:14:00 PM
ဒီနေ့ နိုင်ငံတကာသတင်းများ (30 ဧပြီ 2011)
ပြစ်သစ်၊ ဗြိတိန်၊ အီတလီ၊ အမေရိကန် တို့နဲ့ ဆွေးနွေးဖို့အဆင်သင့်ရှိနေပါတယ်။
အပစ်ရပ်ရေး ဗိုလ်မှူးကြီး ကဒါဖီ ကမ်းလှမ်း(နှိပ်ရန်)
ထိုင်းတောင်ပိုင်း ဗုံးကွဲ စစ်သား ၂ ဦးသေ(နှိပ်ရန်)
ဂဒါဖီ ကမ်းလှမ်းချက် နေတိုးပယ်ချ(နှိပ်ရန်)
ငြိမ်းချမ်းရေး၊ ပဋိပက္ခနှင့် အကြမ်းဖက်မှု(နှိပ်ရန်)
အရှေ့အလယ်ပိုင်း အနာဂတ်အပေါ် ဖာရဒ် ဇာခါရီယား ရဲ့အမြင် (နှိပ်ရန်)
ပရ၀ိဟာရဘုရားမြေ ပိုင်ဆိုင်မှု ပြန်သုံးသပ်ဖို့ ကမ္ဘောဒီးယားတောင်းဆို(နှိပ်ရန်)
ကဒါဖီစစ်တပ် တူနီးရှားပိုင်နက် ကျူးကျော်တိုက်ခိုက်(နှိပ်ရန်)
ဆီးရီးယား ထိပ်တန်း တာဝန်ရှိသူတွေကို အမေရိကန်ဒဏ်ခတ်(နှိပ်ရန်)
တော်ဝင် စုံတွဲရဲ့ မင်္ဂလာ ညနေခင်း(နှိပ်ရန်)
BBC Ukrainian တိုက်ရိုက် ရေဒီယို ထုတ်လွှင့်မှု ရပ်ပြီ(နှိပ်ရန်
4/30/2011 07:16:00 PM
NewsNow:(Myanmar) 30 April 2011
Myanmar woos aid groups, but wariness remains(နှိပ်ရန်)
4/30/2011 07:05:00 PM
by Thant Syn on Wednesday, April 27, 2011 at 11:19pm မြန်မာ စစ်ခေါင်းဆောင် တစ်ဦး ဖြစ်ပြီး လက်ရှိ နိုင်ငံ ၏ အမြင့်ဆုံး အာဏာ ကို ရယူ ပိုင်ဆိုင်ထားသည့် ဗိုလ်ချုပ်မှုးကြီး ဟောင်း ဦးသန်းရွှေ သည် ၎င်း ၏ဘ၀ ဖြစ်စဉ် အား မြန်မာနိုင်ငံ တွင်း ရှိ နာမည် ကျော် စာရေး ဆရာ အချို့နှင့် တိုင်ပင် ပြီးရေးသား လျှက် ရှိကာ မကြာမှီ ထုတ်ဝေနိုင်ရန်
4/30/2011 06:43:00 PM
AFP/File – Cyclone Nargis which smashed through the southern delta region in May 2008 left an estimated 138,000 … သစ်ထူးလွင်
4/30/2011 11:28:00 AM
ရွှေတိဂုံ ရင်ပြင်တော်ရှိ ကျောင်းသားသပိတ် ကျောက်စာတိုင် ပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ပေးမည်ဟု ကြားသိရ
ရွှေတိဂုံစေတီတော် ရင်ပြင် စနေထောင့်ရှိ တားမြစ်ဧရိယာ ကန့်သတ်၍ ပိတ်ထားသည်မှာ ၅ နှစ်ခန့် ကြာမြင့်ပြီ ဖြစ်သော ကျောင်းသားသပိတ် ကျောက်စာတိုင်ကို မကြာမီ အများပြည်သူ ကြည့်ရှုလေ့လာရန် ပြန်လည်ဖွင့်လှစ်တော့မည်ဟု ကြားသိရသည်။
4/30/2011 06:23:00 AM
Suu Kyi friend gets job as Myanmar president’s adviser
Saturday, 30 April 2011 01:26 YANGON: A friend of Aung San Suu Kyi has been appointed as an adviser to Myanmar’s president, he said vowing to aid “co-operation” between the democracy icon and the government.
4/30/2011 06:07:00 AM